Kor ugu akhri websaydka barowsarka Microsoft Edge
Startseite/Browserka geeska/Kor ugu akhri websaydka barowsarka Microsoft Edge
Vangelis6. Sebtembar 2021
Browserka Microsoft Edge wuxuu leeyahay shaqooyin badan oo waxtar leh. Mid ka mid ah ayaa kor u akhrinaya mareegaha. Website -ka hadda furan ayaa si habboon kor loogu akhriyi karaa. Shaqadani aad bay waxtar ugu leedahay dadka waayeelka ah ama araga naafada ka ah. Waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo hawshan buugga.
Kor u akhri mareegaha
Marka lagu daro shaqooyinka tirada badan sida Duubista shabakadda, meesha aad si fudud uga geli karto Screenshot mareegaha hadda jira, waxaa sidoo kale loo soo bandhigay in kor loogu akhriyo codka kombiyuutarka. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa foomka Xawaaraha akhriska iyo luuqaddee mareegaha lagu akhriyaa.
Bilow Browser -ka Microsoft Edge, booqo mareegaha aad rabto.
Midigta sare, guji 3 dhibcood
Sida ugu dhakhsaha badan menu u furmo, guji "Si kor loogu akhriyo."
Bar yar ayaa ka soo muuqanaysa xagga sare halkaas oo aad ku joojin karto akhriska wakhti kasta oo aad hore ugu booddo ama dib ugu noqoto barta xigta.
Ikhtiyaarada goobtu waxay ku taal dhinaca midig Ma gujin kartaa badhanka "Ikhtiyaarka kor loogu akhriyo" guji meesha aad ka dooran karto xawaaraha akhriska inta u dhexaysa gaabis, caadi iyo degdeg. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa mareegaha luqad kasta halkan.
Haddii aad rabto inaad joojiso akhriska, kaliya guji "X ".
Talo: Waxa kale oo aad bilaabi kartaa akhrinta mareegaha adiga oo riixaya isku -darka muhiimka ah CTRL + SHIFT + U isticmaal.
Fujitsu Esprimo Q920 0-Watt Intel Core i5 240GB SSD drive hard drive 8GB memory Windows 10 Pro Business ... 92 qiimeyn 177,00 EUR Ka iibso Amazon
Windows 11 ee bilowga ah iyo kuwa beddelaya: Nidaamka hawlgalka cusub ee Microsoft ee bilowga iyo ... Waqtigaan dib u eegis la'aan 14,95 EUR Ka iibso Amazon
Buugga barashada Windows 11 - daaqadaha cusub ayaa gebi ahaanba la sharraxay. Bilowga iyo adeegsadayaasha horumarsan Waqtigaan dib u eegis la'aan 19,95 EUR Ka iibso Amazon
Waafajinta biraawsarka Edge taleefanka casriga ah ama kiniiniga
Microsoft Edge ma shaqeynayo - sida loo hagaajiyo biraawsarka
Beddel mashiinka raadinta Microsoft Edge
Barkinta Horudhaca tabka Microsoft Edge
Shakhsiyeynta Browser Edge, Bogga Hore, Soodejinta; Kordhinta
Browser -ka Microsoft Edge - u bilow bogga sida TAB cusub
Barkinta kaydinta kukiyada Microsoft Edge
Ku fur daaqadda cusub ee InPrivate ka saar Browser -ka Edge
Ku dhaqaaji Habka Madoow Edge Chromium (hab mugdi ah)
browser qarkiisa biraawsarka geeska si kor loogu akhriyo Microsoft Microsoft Edge Browser
Browserka Edge wuxuu bedelaa midabka iyo naqshadeynta
U adeegso duubista shabakadda Edge Chromium - kani waa sida ay u shaqeyso
16. Maarso 2021